Vahoaka matotra… tsy andairan-tsaho | NewsMada
Vahoaka matotra… tsy andairan-tsaho
Par Taratra sur 18/02/2021
Zo ny fahazoana sy fahalalana vaovao, ady fiady ankoatra izay heverina sy lazaina ho tsiambaratelom-panjakana. Misy fetra anefa izay; matetika, olana tsy mampifankahazo amin’ny fifandraisan’ny vahoaka sy ny mpitondra… nifandimby. Misy na be loatra aza indraindray ny ankifonofono, hany ka mahazo vahana ho azy ny honohono.
Tsy lavina, misy tena fanahy iniana noho ny haratsian-toetra ny mahatonga ny sasany hamafy lainga sy hanely tsaho: finiavana sy fitiavana hanakorontana fotsiny izao. Mety ho antony politika, ohatra, no manesika sy manosika ho amin’izay. Tsy ijerena lavitra izay mety ho voka-dratsiny fa ny tombontsoa manokana no zava-dehibe sy mahamaika.
Ao indray ny be kajikajy sy paipaika, minia mamoron-dainga hahitana ny marina amin’izay tiana na tsara ho fantatra. Mandona tapany hahazoana erany? Rehefa amin’izay manahirana, hivoaka eny ihany ny marina na ho ela na ho haingana. Voatery mamaky bantsilana tsy fidina ny raharaha mba tsy hiitarany ho zavatra hafa tsinona ny tomponandraikitra.
Lasa adihevitra ary inian’ny sasany roritina ho azy izany, rehefa tsy marin-toerana ny fifampitokisana. Velona ny hoe mamono afo hisorohana ny korontana, manamarin-tena fa tsy te ho afa-baraka… Inona anefa no fototra sy fositra nahatonga izany? Tsy filazana sy fanazavana mialoha izay tokony ho fantatry ny vahoaka.
Mba hatao izay lazaina, fa lazaina izay hatao. Tsy midika izany hoe ndeha hahahaka avokoa io tsy anononana rehetra io; eny, na izay hoe tsiambaratelom-panjakana aza. Tsy zaza bodo na bado akory ny vahoaka ka tsy hahalala sy hahay handanjalanja izay tokony ho fantany amin’ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena… iaraha-manana sy mizaka.
Eny, na misy aza, ohatra, ny fandranitana sy famitaham-bahoaka afitsoky ny mpanao politika sasany amin’ny famafazana lainga sy fanelezana tsaho. Ny fampahafantarana mialoha ny vahoaka amin’izay tsara sy tokony ho fantany no anisan’ny tsy mampandaitra ho azy amin’izao ny karazana lainga sy tsaho. Matotra ny vahoaka amin’izay?